दूधमा पानी मिसाउनु हुन्छ ? १० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ला ! – NewsAgro.com
दूधमा पानी मिसाउनु हुन्छ ? १० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ला !
December 14, 2018 December 14, 2018 newsagro0Comments कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, दूध, दूधमा पानी मिसाउनु हुन्छ ? १० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ला !
यो समाचार 149 पटक पढिएको
काठमाडौं । सरकारले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा स्वच्छता कायम गर्न निर्देशिका जारी गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘दूध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता एवं गुणस्तर निर्देशिका, २०७५’ जारी गरेको हो । निर्देशिका मुलुकभरका दूध उत्पादन, संकलन, चिस्यान केन्द्र सञ्चालन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी तथा बिक्रीवितरण गर्ने सबै व्यवसायमा लागू हुनेछ । निर्देशिकाले दूध उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको चरणमा स्वच्छता र गुणस्तर कायम गर्न सघाउ पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
निर्देशिकाअनुसार दूध उत्पादक किसानले पशुचौपाया स्वास्थ्य, गोठ तथा फार्मको सरसफाइ, दूध दुहुने भाँडा र व्यक्तिगत सफाइमा समेत ध्यान दिनुपर्नेछ । दूध दिने जनावर स्वस्थ हुनुपर्ने, दूध दुहुनुअघि साबुन पानीले राम्ररी हात धुनुपर्ने, हातमा घाउ चोट तथा खटिरा नभएको तथा संक्रामक रोग नलागेको हुनुपर्ने, गोठ सफा सुग्घर राख्नुपर्ने, दुध दुहुने भाँडो सजिलै सफा गर्न सकिने र ठूलो मुख भएको र स्टेनलेस स्टिल वा अल्मुनियमको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
‘दूध दुहेपछि संकलन केन्द्र वा चिस्यान केन्द्र अथवा प्रशोधन कारखानामा बढीमा दुई घण्टाभित्र पुर्‍याइसक्नुपर्नेछ, बिहानको दूध बिहानै र बेलुकाको दूध बेलुकै संकलन केन्द्रमा पुर्‍याउनुपर्नेछ’, निर्देशिकामा भनिएको छ ।
निर्देशिका जारी भएको मितिले ६ महिनापछि अर्थात आगामी चैत देखि लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । अनुगमन र निरीक्षणका क्रममा निर्देशिका बमोजिम नभएको पाइए सम्बन्धित दुग्ध व्यवसाय सञ्चालकमाथि खाद्य ऐन २०२३ अनुसार कारवाही हुनेछ ।
← कृषिका १३ वैदेशिक आयोजनाको खर्च एक चौथाई मात्र
साढे नौं करोड खर्चेर इटलीबाट स्याउका ९० हजार बिरुवा आयात गरिँदै →
भारतमा लगाइएको नेपाली अदुवामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा
July 5, 2018 newsagro 0
आक्रोशित नेपाली किसानको कब्जामा भारतीय गोलभेंडाको ट्रक